Mashruuca cusub ee "Avengers" ee mashruuca Marve ayaa mar horeba socda, laakiin taasi maahan waxaad filaysay - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Mashruuca xiga ee 'Marvel Avengers' wuxuu mar horeba socdaa dhismaha, laakiin taasi maahan waxaad filaysay - BGR
Marvel wuxuu u baahday laba dhacdo oo kaladuwan si uu ugu dhawaaqo wax kasta oo ku dhici doona MCU hadda Rakaabka: Dhamaan gadaashayada: San Diego Comic-Con iyo bandhiga sanadlaha ah ee D23. Shirkadda waxay daaha ka qaaday inay leedahay dhowr sawir oo diyaarin ah oo lagu sii deyn doono tiyaatarada labada sano ee soo socota, iyo sidoo kale dhowr koobyo kooban oo xaddidan oo MCUs ah oo hawada ku siibi doona adeegga Disney + soo socda. Waxyaabaha soo socdaa midkoodna kama noqon doono qayb ka mid ah guryaha Marvel ee caanka ah ee aan jecelnahay sannadihii la soo dhaafay, sida Avengers Masuuliinta et Spider-Man - Dambe xitaa kuma jiro MCU mar dambe. Iyada oo ay tahay qaybtii saddexaad ee loo yaqaan 'franchise' Masuuliinta mar horeba waa diyaar garow, Marvel waxba kama dhihin qolkiisa Rakaabka 5 .
Horey ayaan kuugu sheegay arintaas ] Marvel kaliya ma dhiibi karo Avengers-ka tixgalinta faa iidada hantidaan, waxaanna badanaaba yeelan doonnaa hool cusub Avengers mar qaar ka mid ah geesiyaasha cusub ayaa la soo bandhigay. Warbixin cusub ayaa hadda noo sheegaysa in Marvel dhab ahaantii ka shaqeyneyso mashruuc cusub Avengers laakiin ma noqon doonto sidaad u malaynayso.
Danjiraha Daniel Richtman, oo bixiyay faahfaahinta tafaasiisha ugu horeysa ee MCU, markii hore, wuxuu ku soo noqonayaa muuqaal cusub, via FullCircleCinema . Sida muuqata, Disney iyo Marvel waxay ka shaqeynayaan taxane telefishan Rabshadaha Dhalinyarada ah loogu talagalay Disney +, oo soo bandhigi doonta qaar ka mid ah superheroes-yarada ka soo jeeda daafaha Marvel. Marka loo eego Richtman, markaa ka dib way kobcin karaan qofkasta oo waxay ka soo muuqan karaan filimada MCU dambe.
Wali garan mayno cidda ku biiri doonta kooxdan Avengers, laakiin taxanaha Hawkeye qayb ka mid ah Wajiga '4 Wajiga' ayaa laga yaabaa inuu muujiyo badalkiisa, Kate Bishop. Ant-Man gabadhiisa, Cassandra Lang, oo aan horay ula kulannay oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo ku jiray 2023 in Endgame sidoo kale ka mid noqon kara kooxda. Maaha in la xuso nin dhalinyaro ah oo goob joog ka ahaa aaska Tony Stark intii lagu gudajiray Endgame kaasoo sidoo kale noqon kara aarsada dhalinyarada mustaqbalka. Kani waa mala-awaal waqtiga xaadirka ah.
Waxaa intaa dheer, Richtman ma ahan ma aha insider-kii ugu horreeyay ee sheegta Adventures ee dhalinyarada Avengers waxay ku jiraan diyaar garow. Laakiin tani waa markii ugu horreeysay ee aan maqalno wareegtadan Rakaabka waxaa ka mid noqon kara taxanaha Disney + xaddidan iyo sidoo kale filimo. Dhanka kale, in dhalinyarada Avengers la siiyo taxane telefishan xaddidan waxay noqon kartaa fikrad ka wanaagsan kan filimada midkasta leh. Qaabkaan, waxaan kula kulmi doonnaa dhammaan jilaayaashaan cusub waqti dheer kahor halista qatarta soo socota ee Thanos ay ku dhufaneysaa MCU.
Ha ka fileyn in Disney ama Marvel ay xaqiijinayaan wax kasta xilligan Horey ayey ugu dhawaaqeen mashaariic badan oo 4 ah waxayna umuuqataa inaysan macquul aheyn in mashruucyo kale lagu daro barnaamijyada iyo filimada hada jira. Marka laga hadlayo filimka xiga ee weyn Avengers Warbixin dhowaan la sheegay in Marvel uu shaqeynayay laga yaabee of crossover weyn oo u dhexeeya Avengers iyo X-Men for Rakaabka 5 .
. Isha: Marvel Studios